Manchester City Oo Guul Ka Gaartay Wolves Iyagoo 15 Dhibcood Ku Qabtay Horyaalka
Home Horyaalka Ingiriiska Manchester City oo guul ka gaartay Wolves iyagoo 15 dhibcood ku qabtay...
Kooxda Manchester City ayaa guul ka gaartay kooxda Wolves kulan ka tirsan Horyaalka Premier league oo ka dhacay Garoonka Etihad Stadium kaasi oo ku soo dhamaaday 4-1.
Waxay ku qaadatay Man City inay hogaanka u qabatay ciyaarta 15 daqiiqo markii karoos uu soo dhigay Riyad Mahrez uu shabaqa iska geliyay Dendoncker. Halka goolhaye Patricio uu fursad kale oo halis aheyd ka badbaadiyay Bernando Silva.
Wolves ma aysan helin xitaa hal darbo qeybtii hore ee ciyaarta oo lagu kala nastay 1-0 oo ay City hogaanka ku heysay kuwaasoo dhameystiray 413 baasas.
Qeybtii labaad Wolves ayaa naf isgelisay iyagoo ka fiicnaa sidii qeybtii hore laakiin weerarada Man City waxay ahaayeen isdaba joog iyadoo Patricio uu fursad kale oo halis aheyd ka beeniyay Kevin de Bruyne.
Daqiiqadii 61aad ciyaarta ayaa isdaba rogtay markii Wolves ay si lama filaan ah ku dhalisay goolka barbaraha iyagoo qaaday weerarkoodii ugu horeeyay ee ciyaarta.
Moutinho ayaa laad xor ah soo dhex dhigay xerada goolka iyadoo Wolves ay ka badbaaday dabinta offsideka, waxaana kubada madax ku dhaliyay Coady oo dhaliyay goolkiisii ugu horeysay abid ee Premier League isagoo saftay 103 kulan.
Man City ayaa soo ceshatay hogaankeeda daqiiqadii 80aad ee ciyaarta, karoos uu soo dhigay Walker oo uu sii taabtay Coady ayaa waxaa helay Gabriel Jesus oo shabaqa ku hubsaday.
Daqiiqadii 90aad Riyad Mahrez ayaa ciyaarta hurdo u diray isagoo dhaliyay goolka seddexaad, laakiin City halkaas kuma harin waqtigii dhimashada ciyaarta waxaa goolka afaraad u saxiixay Gabriel Jesus oo ay aheyd goolkiiisii labaad ee ciyaarta.
Manchester City ayaa kulanka xiga la ciyaaridoonta kooxda Man United Maalinta Axada
Previous articleRio Ferdinand oo ku booriyay Manchester United inay la soo saxiixato Erling Haaland ama Kylian Mbappe
Next articleJuventus oo uga badisay 3-0 Spezia: Cristiano Ronaldo oo Shabaqa soo taabtay